प्रतिष्ठान वारे यसो भन्छन् विशेषज्ञ डाक्टरहरु – Janaubhar
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १४, २०७५ | 279 Views ||
प्रतिष्ठान वेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो मात्र बन्नु हुँदैन
डा. जितनारायण यादव
फिजिसियनराप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण हुँदैछ । हामीले उपक्षेत्रीय अस्पतालमा लामो समय काम गरेका छौं । हामीले यहाँ रहेर काम गर्दा निकै राम्रो अनुभव हासिल गर्ने मौका पायौं । हामीले जनतालाई कत्तिको सेवा प्रभाव गर्न सक्यौ भन्ने कुरा यहाँको समाजले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । सबै पक्षको पहलमा प्रतिष्ठान आएको छ । म प्रतिष्ठान सफलताको कामना गर्द छु । हामी धेरैलाई प्रतिष्ठानको अवधारणा वारे थाहा नहुन सक्छ । प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा वित्तिकै सबै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । देशै भरी भएका प्रतिष्ठानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र के उद्देश्यका लागि हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले नेपालमा वार्षिक दुई देखि तीन हजार एमविविएस डाक्टरहरु उत्पादन भइरहेका छन् ।
ती मध्ये धेरै जसो वेरोजगार नै छैन । केही डाक्टरहरु पैशा कमाउने आशाले विदेश पलायन भइरहेका छन् । अहिलेकै ट्रेण्ड हेर्ने हो भने नेपालमा अँझ धेरै डाक्टर उत्पादन हुने देखिन्छ । डाक्टर उत्पादन हुने वितिक्कै सबै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि हामीलाई भौतिक संरचना र उपकरणहरुको पनि त्यतिकै आवश्यकता पर्दछ । हामीलाई सामान्य डाक्टरले मात्रै पुग्दैन विशेषज्ञ डाक्टर चाहिन्छ । जनताहरु प्नि सचेत भइसकेका छन् । अब एमविविएस डाक्टरसँग मात्रै सेवा लिएर चित्त बुझाउने स्थिति छैन । उनीहरु विशेषज्ञ डाक्टर खोज्छन् ।
अब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्वले सचेत भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । प्रतिष्ठान जनशक्ति उत्पादन मात्रै हो की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हो भनेर हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य आवश्यक संरचना नहुँदै पढाई शुरु हुँदैन । त्यो बीचमा यहाँ रहेका हामी सबै विशेषज्ञ डाक्टरहरु गइसकेका हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र थप कमजोर बन्न सक्छ । बरु सरकारी अस्पताललाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै प्रतिष्ठानमा अध्यापन गराउन थालेको भए सजिलो हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानले डाक्टरहरुको प्रयोगात्मक काम उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट गर्न सक्दथ्यो ।
सरकारी अस्पताल छुट्टै सञ्चालन हुनु पर्दथ्यो
अर्थोपेडिक सर्जन डा.ओम अर्याल
अहिले सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले निकै सर्वसुलभ ढंगले सेवा पाईरहेका छन् । प्रतिष्ठान भइसकेपछि स्वभाविक रुपमा अहिले भन्दा केही महंगो शुल्क तिनुपर्छ । प्रतिष्ठान सञ्चालन भइसकेपछि हामी सरकारी दरवन्दिका कोही डाक्टर पनि रहन पाउँदैनौं । हामी सरकारी नियम अनुसार अन्यत्र सरुवा भएर जानुपर्ने हुन्छ । जनताहरुलाई प्रतिष्ठान आइसकेपछि लगत्तै सबै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढंगले प्राप्त भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
प्रतिष्ठान बन्नु यस क्षेत्रका जनतालाई राम्रो हो । यो सफल पनि हुनुपर्छ । तर, हामीले प्रतिष्ठान नीतिगत रुपमा बन्ने तर, व्यवहारीक रुपमा अहिले प्राप्त भइरहको स्वास्थ्य सेवा पनि थप कमजोर बन्ने अबस्था भने सृजना गर्नुहुँदैन । हामीसँग अहिले नै प्रतिष्ठानमा मेडिकल शिक्षाका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारहरु छैन । यो बीचमा बरु नीति बनाउनेहरुले प्रतिष्ठानमा पढाई शुरु गर्दै उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सरकारी मातहतमा नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्दथ्यो । बरु यसको स्तर वृद्धि गर्दै प्रतिष्ठानको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । अहिले अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण हुन थालेको छ । प्रतिष्ठानमा काम गर्दा सरकारी दरवन्दिबाट विदा हुनुपर्ने भएकाले हामी डाक्टरहरु अन्यत्र जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठान घोषणा गर्ने बेला नै अस्पताललाई सरकारी मातहतमा नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
प्रतिष्ठानले महंगो पैशा तिरेर डाक्टरहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिष्ठानका लागि विनियोजन गरेको बजेटले पुग्दैन । अहिले भइरहेको सेवा शुल्क नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अबस्थामा जनतालाई थप मर्का पर्ने देखिन्छ । अँझै पनि नीतिगत सुधार गर्न सक्ने ठाउँछ । कमसेकम प्रतिष्ठानमा अध्यापन शुरु गर्ने र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सरकारीमै सञ्चालन गर्ने विधि नै सबैभन्दा वैज्ञानिक विधि हो ।
विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ध्यान दिनुप¥यो
रेडियोलोजिष्ट डा.रामेश्वर देवकोटा उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण हुने वित्तिकै यहाँका अधिकांश सरकारी दरवन्दिका डाक्टरहर यहाँ बाट सरुवा भएर जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यहाँका जनताले सेवा पाउन नसक्छन् । त्यसैले प्रतिष्ठान नेतृत्वले तत्काल विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । प्रतिष्ठान रिफर सेन्टरको रुपमा परिणत भयो भने राम्रो हुँदैन । कमसेकम आधारतभूत तथा उपलब्ध विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको इमरजेन्सि सेवा हो ।
इमरसेन्सि सेवा प्रभावकारी हुन सकेन भने प्रतिष्ठानको कुनै औचित्य नै हुँदैन । तत्काल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले इमरजेन्सि सेवामा ध्यान दिनै पर्छ । प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर भएर हुँदैन । कमसेकम एउटा विशेषज्ञ सेवाका लागि दुई ओटा विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्छ । एउटा विदामा बसेपनि अर्कोले सेवा दिन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण हुने भए पछि मैले सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रसुति सेवामा देख्छु ।
अहिले अस्पतालमा सिईओएनसि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले अहिले सर्वसुलभ ढंगले प्रसुति सेवामा अप्रेशन भइरहेको छ । यसले आम सर्वसाधारणलाई सजिलो भएको छ । अब यो कार्यक्रम नै हट्ने भए पछि महंगो पैशा दिएर प्रसुति सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान दिन जरुरी छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा रोक्नु हुँदैन
डा. कृष्णहरी सुवेदी
बाल रोग विशेषज्ञस्वाभाविक रुपमा कुनै पनि नयाँ काम गर्दा चुनौती अवष्य नै हुन्छ । प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा पनि धेरै चुनौतीहरु अवष्य आउने छन् । ती चुनौतीहरु पार गर्नु प्रतिष्ठान नेतृत्वको भूमिका रहन्छ । अहिलेसम्म राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले आम सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हामीले अन्यत्रका प्रतिष्ठानको अनुभव हेर्ने हो भने सरकारले आवश्यक पूरै रकम विनियोजन गर्न सकेको छैन । यस्तो खण्डमा त्यहाँ आउने विरामीहरुकै शुल्कबाट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले प्रदान भइरहेको सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पनि जनताले थप रुपैयाँ तिनुपर्छ ।
अप्रेशन शुल्क पनि बढ्छ । विशेषज्ञ डाक्टरहरु ल्याउनका लागि प्रतिष्ठानले महंगो पैशा तिरेर ल्याउनुपर्छ । बरु सरकारी अस्पताललाई निरन्तर चल्न दिने हो भने सरकारी दरवन्दिमा डाक्टरहरु हुन्थ्ये । त्यो अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई थप भार पर्दैन थियो । यसको सबैभन्दा वैज्ञानीक विधि सरकारी अस्पताल निरन्तर सञ्चालन गर्ने नै हो । बरु सरकारी दरवन्दिमा अँझ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानका डाक्टरले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नुका साथै अध्यापन गर्दथे । यो भएमा स्वास्थ्य सेवा पनि सर्वसुलभ ढंगले सञ्चालन हुने । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्यापनको कक्षा पनि सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सक्थ्यो ।
सरकारी अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्दै जाने र प्रतिष्ठानको अध्यापन साथसाथै सञ्चालन गर्न सकेको भए जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले प्रतिष्ठान सञ्चालन हुने वित्तिकै जग्गा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, र जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौति एकै पटक थपिन्छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ भइरहेको विशेषज्ञ सेवा पनि रोकिने अबस्था हुन्छ । प्रतिष्ठानको काम अध्यापन शुरु गर्नु मात्र नभएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पनि हो भन्ने कुरालाई हामीले विर्सन हुँदैन । जे भए पनि अब प्रतिष्ठान नेतृत्वले समयमै ध्यान पु¥याएर जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले सेवा प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
Prevनेकपाले छान्यो प्रदेश नेतृत्व
Nextपुराना पोलले सर्वसाधारण जोखिममा